ओरेकको अध्यक्ष डा. पुनम रिसाल |
ओरेकको अध्यक्ष डा. पुनम रिसाल
प्रकाशित मिति :2017-10-16 12:02:45
काठमाडौं । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को अध्यक्षमा डा. पुनम रिसाल मनोनित भएकी छिन् । संस्थाको आइतबार काठमाडौंमा भएको २७ औं वार्षिक साधारण सभाले रिसाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । उनले यसअघिको कार्यकालमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् ।
यस्तै संस्थाको उपाध्यक्षमा डा. लक्ष्मी तामाङ, सचिवमा जया लुइटेल र कोषाध्यक्षमा पार्वती बस्नेतलाई चयन गरिएको छ भने रिक्त रहेको सदस्य पदमा दुर्गा कार्कीलाई मनोनित गरि सभाले कार्य समितिलाई पूर्णता दिएको छ । समितिको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ ।
महिलाको राजनैतिक सहभागिता, उनको स्वास्थ्य र शारीरिक स्वामित्वसँगै समाजमा समान दखल, सामाजिक न्यायको पूर्वसर्त हुन भन्ने मान्यता सहित ओरेकले महिला अभियानको रुपमा २७ वर्ष देखी नेपालमा देशब्यापी काम गर्दै आएको छ ।